Homeस्वास्थ्य/विशेषबिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनु अमृत समान : डा. कुँवर
December 22, 2019 Spnews स्वास्थ्य/विशेष Comments Off on बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनु अमृत समान : डा. कुँवर
जाडो मौसम होस् या गर्मी मौसम नै किन नहोस् मानव शरीरका लागि पानी पहिलो प्राथमिकता हो । हामीलाई लाग्ने अधिकांश रोगहरु पानीका कारण लाग्ने गर्दछन् । पानी पिउँदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अझ खाली पेटमा पानी पिउँनु स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
वरिष्ठ पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सन्दीपराज कुँवर भन्छन्– ‘यदि मानिस स्वस्थ रहने हो भने पहिले पेटलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ ।’ मानिसका अधिकांश रोग खानपानबाटै उब्जिन्छन् । पेटलाई सबै कुरामा बचाउने हो भने अधिकांश प्राणघातक रोगबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ । पेट स्वस्थ्य बनाउन बिहानै मनतातो पानी पिउनु अमृत समान हुन्छ । खाली पेट पानी खाँदा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो ।
प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन् । पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन् । यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ । खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुने बताइन्छ । विहान मनतातो पानी पिउँदा पुग्ने फाइदा यस्ता छन् :